Tsy hisy olona hanesotra ny hafalianareo
Izy no ilay mpianatra nanoratra izany...
Sabotsy 30 mey 2020 — Herinandro fahafito amin'ny Paka — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Joany 21, 20-25 — Hirahiko ho eo aminareo ny Fanahin'ny Fahamarinana, hoy ny Tompo ; Izy no hitari-dalana anareo amin'ny marina rehetra.
Masimbavy Jeanne d'Arc (Kintan'ny finoana) 30/05/2020 06:30
Izy no ilay mpianatra nanoratra izany... (Tenin'ny Tompo) 30/05/2020 04:00
Masindahy Maximin de Trèves (Kintan'ny finoana) 29/05/2020 06:30
Fahano ny zanak'ondriko... (Tenin'ny Tompo) 29/05/2020 04:00
Masindahy Germain de Paris (Kintan'ny finoana) 28/05/2020 06:30
Mba ho iray ihany izy ireo (Tenin'ny Tompo) 28/05/2020 04:00
Masindahy Augustin de Cantorbéry (Kintan'ny finoana) 27/05/2020 06:30
Ho iray tahaka antsika anie izy ireo (Tenin'ny Tompo) 27/05/2020 04:00
I Vola  (Tantara) 26/05/2020 08:40
Masindahy Philippe Néri (Kintan'ny finoana) 26/05/2020 06:30
Nosoratan'i Rasolonjatovo Borgia
Lohahevitra : Tenin'ny Tompo
Naseho ny : 22 mey 2020
Zoma 22 mey 2020 — Herinandro fahenina amin'ny Paka — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Joany 16, 20-23 — Tsy havelako ho kamboty ianareo, hoy ny Tompo ; handeha Aho ary ho avy aminareo indray, ka ho faly ny fonareo.
Mbola miaina mandrakariva ny hafaliana vokatry ny Paka isika izao. Alohan’ny Pakan’i Jesoa, niaina ny fijaliana ireo mpianatr’i Jesoa. Fanambarany Azy eto ny hoe: “fa hitomany sy higogogo ianareo” ; hitomany sy higogogo satria hosamborina i Jesoa izay nianteheran’izy ireo, hampijaliana. Teto ny mpianatra dia lasa nandositra noho ny tahotra, nalahelo satria tafasaraka amin’i Jesoa. Ireo mpampijaly Azy kosa ho faly satria hohesorina hiala eo amin’izy ireo ilay manelingelina ny fiainany.
Fa hiova hafaliana kosa ny Fijalian’ireo mpianany ireo satria hahita Azy hitsangan-ko velona. Toa kodiaran-tsarety tokoa ny fiainany ka ny fijalian’izy ireo mody ho hafaliana. Oharin’i Jesoa amin’ny vehivavy eo am-piterahana izany fijaliana sy hafaliana hiainan’ny mpianany izany. Rehefa mihetsi-jaza ny vehivavy mitaraina sy mitomany noho ny fijaliana sy fanaintainana iaretany ; fa rehefa teraka kosa, faly satria misy olom-baovao tonga eto an-tany koa hadinony miaraka amin’izay ny fahoriana niaretany rehefa raisiny eo am-pofoany ilay menaky ny ainy.
Ny Paka dia fahaterahan’ny fiainam-baovao. Nampijaliana sy novonoina I Jesoa fa velona indray ka nampiteraka fiainam-baovao. Fiainana feno hafaliana sy fiadanana ; hafaliana lavorary satria maharitra mandrakizay. Fahateraham-baovao satria velona indray ary velona mandrakizay. Tsy ho toy ny hafalian’izao tontolo izao izay mandalo ihany ary hafaliana mifono tahotra sy tebiteby. Miainga avy ao amin’i Jesoa maty sy nitsangan-ko velona ny hafaliantsika kristiana manara-dia an’i Kristy. Mahenika ny fiainana manontolo ao anatintsika ao izany : ny fo amam-panahintsika, ny fahasahiana ao anatintsika ao hiatrika ny fiainana isan’andro, ny zotom-po. Fa tsy fiainana ao anatintsika ihany fa eo amin’ny fiaraha-monina misy antsika koa : ny fianakaviana, ny Fiangonantsika. Miova ho tontolo vaovao ny tontolo misy antsika noho izay finoantsika an’i Jesoa maty sy nitsangan-ko velona izay. Isika mitondra io finoana io eny amin’ny fiainantsika andavan’andro io no mampisy dikany sy hasiny ny fiainantsika ka izay lalovantsika rehetra toa feno fanantenana sy fandresena eo am-piatrehana ny andavan’androm-piainantsika. Koa ho Paka feno hafaliana lalandava anie ny fiaiantsika. Amen!
2020-05-14 / 22:29:32 - Nitombo 18 ny isan’ireo olona voamarina fa mitondra tsimokaretina coronavirus raha ny valin’ny fitiliana vita hatry ny omaly. Niisa 210 ny fitiliana vita tamin’io omaly io ka ny 13 tamin’ireo no voatily ho miondra ny tsimokaretina. Avy tamin’ireo olona 67 namerenana ny fitiliana kosa ny 5. Natao teto Antananarivo ny 185 tamin’ireo fitiliana 210 ary tany Toamasina ny 25. Olona iray no sitrana omaly. Miisa 230 izany hatramin’izao ny fitambaran’ny olona voamarina fa mitondra ny tsimokaretina nanomboka ny 19 marsa. Efa sitrana ny 108 amin’ireo ary mbola manaraka ny fitsaboana any amin’ny hôpitaly ny 122.
2020-05-14 / 22:24:16 - Avy any Moramanga ny 11 tamin’ireo voatily miisa 13 omaly alarobia ary avy any Toamasina ny 2. Lehilahy ny 7 tamin’ireo voatily tany Moramanga ary vehivavy ny 4. Eo anelanelan’ny 25 sy 60 taona izy ireo. Lehilahy iray 32 taona sy vehivavy iray 26 taona kosa ireo olona 2 voatily avy any Toamasina. Ireo olona 5 nanaovana ny fitiliana naverina kosa dia lehilahy ny 3 amin’izy ireo ary vehivavy ny 2. Avy eto Antananarivo ny 2 tamin’izy 5 ireo ary avy any amin’ny faritra Atsinanana ny 3.
2020-05-14 / 22:18:00 - Nakatona nanomboka tamin’ny alatsinainy 11 mai teo ny sampan-draharaha misahana ny fitsaboana ny homamiadana ao amin’ny HJRA Ampefiloha. Nakatonona ho fanarahamaso sy fanokana-monina ireo mpitsabo sy marary manaraka fitsaboana ao amin’io sampana io, taorian’ny fahafatesan’ny marary iray avy any Toamasina tamin’ny sabotsy 9 mai teo. Nandalo ny fitiliana coronavirus izy ireo ka niiba avokoa ny valin’izany. Niverina nisokatra nanomboka androany alakamis 14 maiy io sampana io.
2020-05-12 / 22:48:41 - Nitombo 6 ny isan’ireo olona voamarina fa mitondra ny tsimokaretina coronavirus raha ny valin’ny fitiliana natao ny alatsinainy 11 mai. Avy any Toamasina avokoa ireo trangan’aretina 6 ireo. Miisa 192 izany ankehitriny ny isan’ny olona voatily fa mitondra ny tsimokaretina hatramin’ny nanambarana ofisialy ny fisian’ny coronavirus eto Madagasikara, tamin’ny zoma 20 marsa teo. 2 no sitrana omaly alatsinainy ka ny 107 amin’ireo 192 ireo izany izao no efa sitrana hatramin’izao. Mbola manaraka fitsaboana any amin’ny hôpitaly ny 85. Niisa 213 ny fitiliana vita omaly alatsinainy. Miisa 5670 ny fitiliana vita tato anatin’ny 53 andro. Momba ireo tranga 6 vaovao hita tany Toamasina dia lehilahy ny 4 ary vehivavy ny 2. Ny 4 amin’izy 6 ireo ihany aloha no fantatra ny taonany. 13, 14 sy 18 ary 40 taona.
2020-05-12 / 22:40:31 - Nirongatra ny fitombon’ny olona mitondra ny tsimokaretina coronavirus any Toamasina. Tato anatin’ny herinandro izao dia efa tafakatra 24 izany raha ny valin’ny fitiliana. Efa mihoatra ny isan’ny mararin’ny covid-19 raisina ao amin’ny hôpitaly Befelatanana akehitriny ny isan’ireo marary raisin’ny hôopitaly any Toamasina, noho izay firongatry ny valanaretina any any-toerana izay. Marihina fa efa vokary ny fifampikasohana avokoa no hifindran’ny tsimokaretina coronavirus eny anivon’ny fiarahamonina eny ankehitriny.
2020-05-12 / 22:35:49 - Andro iraisam-pirenena ho an’ny infirmiera ny 12 Mai. Tamin’ny taona 1965, tsiahivina, no nametrahan’ny filankevitra iraisam-pirenen’ny infirmiera io datin’ny 12 Mai io. Miezaka manamarika izany isan-taona io filankevitra io ka tato anatin’ny 40 taona izao dia misy hatrany ny fampahafantarana azy io miainga amina lohahevitra momba ny asan’ny infirmiera manerana izao tontolo izao. Amin’ity taona ity àry dia noraisina ho lohahevitra anamarihana izay andro iraisam-pirenen’ny infirmiera izay ny hoe : « Ny asan’ny Infirmiera, feo iray natao hitarihana mankany amin’ny tontolo anatin’ny fahasalamana ». Manana anjara toerana sy andraikitra goavana amin’izao fiatrehana ny ady amin’ny covid-19 izao ny infirmiera.
2020-05-11 / 13:05:36 - Nampiaka-peo, mitaky ny hijeren’ny fanjakana azy ireo, ny mpisehatra amin’ny fampiarana tsy miankina, manoloana ny vokatry ny krizy ara-pahasalamana ankehitriny. Mangataka fanampiana, toa ny natao tamin’ny mpampianatra amin’ny sekolim-panjakana izy ireo ka nanome 72 ora ny fanjakana, hijerena vahaolana maharitra amin’izao fiatrehana ny ady amin’ny covid-19 izao. Tsy vahaolana mandalo no andrasan’ny sekoly tsy miankina fa fiaraha-miasa eo amin’ny fanjakana mba hanamaivanana ny fahasahiranan’ny ray ana-dreny amin’ny fampianarana ny zanany. Mangataka ny hihaona amin’ny minisitry ny fanabeazam-pirenena, ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak’asa izy ireo aorian’io fe-potoana 72 ora nomeny io.
2020-05-11 / 13:01:36 - Tsy nisokatra ny fiangonana FJKM Saovimasoandro sy Alarobia Amboniloha omaly alahady ho fampiharana ny baiko avy amin’ny sinaodam-paritany Antananarivo avaradrano, nomena ny mpitandrina iroe fiangonana ireo , tamin’ny zoma teo. Fepetra noraisina manoloana ny fisian’ny valanaretina covid-19 eny amin’ireo faritra ireo. Tamin’ny alalan’ny peta-drindrina no nampahafantarana ny mpino amin’ny tsy fisian’ny fotoam-bavaka. Ankoatra ireo fiangonana FJKM 2 ireo dia fantatra fa tsy nisy koa ny fotoam-pivavahana tao amin’ny FJKM Ivandry sy Ambohijatovo Fitiavana. Marihina fa tsy nanome baiko ny amin’ny fanakatonana ireo fiangonana ireo ny avy amin’ny prefektioran’Antananarivo.
2020-05-11 / 12:53:22 - Miisa 20 ny olona efa voasambotra, voarohirohy amin’ilay raharaha fakàna an-keriny teratany karana, teny Ambatobe, tamin’ny 27 avrily teo. Mitohy ny fikarohana an’i Ramandiamanana Norbert na i LAMA izay voalaza ho atidoha nikotrika izany. Tsy maintsy hatao izay hahatrarana azy io ka hisy ny fanomezana vola 200 tapitrisa ariary izay mahita na afaka manome vaovao momba io olona io. Ho tazonina tsiambaratelo ny mombamomba izay olona manome vaovao sy ny tsy maintsy hiarovana azy. Efa an-taonany maro, tsiahivina, no nikarohana an’i LAMA izay voasokajy ho jiolahy mpamerin-keloka amin’ny fanaovana kidnapping. Raisina avy hatrany ho mpiray tsikombakomba amin’ny mpanao ratsy izay olona mampiantrano ireny olona henjehin’ny fanjakana ireny. Laharan-telefaonina azo antsoina ho an’izay manana vaovao momba izao fakàna an-keriny izao, ny 034 60 969 96 na ny 034 14 006 21.
2020-05-08 / 12:23:31 - Miantso amin’ny tokony hisian’ny fakan-kevitra ho fanarenana ny toekarena sy ny sosialim-bahoaka, aorian’ny covid-19, ny filohan’ny RDS, Fetison Rakoto Andrianirina. Ho tanterahina amin’ny alalan’ny "fakan-kevitra mivelatra izany, hitondran’ny tsirairay ny anjara birikiny ho entina manarina sy manamafy ny laviny ara-toekarena sy ara-tsosialin’ny firenena. Tsinjaraina 3 mazava ny asa amin'izany. Voalohany ny fiantsoana izay manan-kevitra hananganana" drafi-pahamehana". Faharoa ny fifantenana sy fametrahana vaomiera handrafitra ny fepetra azo ampiharina avy amin'ireo tolokevitra. Fahatelo ny fanolorana ny tolokevitra amin'ny filoham-pirenena aorian'ny fandalovan'izany eny amin'ny antenimiera 2 tonta, hamaritana ny ho fanatanterahana izany.